Editor maimaim-poana Illustrator Online
Sintomy ny Illustrator Online
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Sintomy ny Illustrator Online
Ity Vector Graphics Editor ity dia noforonina ho an'ireo vao manomboka sy mpamorona matihanina, mpamorona tranonkala ary mpanakanto manao sary nomerika ary miasa maimaim-poana Solon'ny Adobe Illustrator. Manaova fametahana pejy, famolavolana tranonkala, mamorona sary ary manaova sarisary / tantara an-tsary avy am-boalohany navoaka na amidy. Andramo ity Editor ity alohan'ny hampiasanao Adobe Illustrator Online.
FAQ: Illustrator Online
Mpanolo manontolo ny kinova Illustrator Online ve ity mpamoaka lahatsoratra ity?
Tsia, ity tonian-dahatsary ity dia natao manokana ho an'ireo mpanakanto tsy manam-paharoa sy mpamorona izay haingam-pandeha.
Miasa amin'ny sary vetaveta ve ny editor?
Ity tonian-dahatsoratra mandroso ity dia afaka miasa miaraka amin'ny sary raster sy vector. Azonao atao ny mampiasa azy io mba hamoronana logo na hiasa amin'ny famolavolana magazay lamaody. Izy io koa dia manohana fisie SVG.
Azoko atao ve ny manolo ny loko ambadika modely tany am-boalohany?
Eny, azonao atao ny mampiasa azy amin'ny sosona, mametaka takelaka vaovao na miverina amin'ny dingana ilaina amin'ny fampiasana ny tantara. Na izany aza, raha vaovao amin'ny fanovana sary ianao, dia ampirisihinay hifandray serivisy fanovana ambadika avy amin'i FixThePhoto, mba hialana amin'ny olana sy fanontaniana hafa.
Ahoana no ahafahako manohy miasa avy amin'ny toerana nijanonako?
Tehirizo ao amin'ny Endrika fisie PSD. Azonao atao ny manohy miasa amin'ny toerana nijanonanao.
Adobe Illustrator Online - Trick video: